मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुको कार्यकालका र एक–एक मन्त्रालयमा सचिव तोकियो !
काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार थप एक सय ७७ कर्मचारी प्रदेशमा खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार १४ सहसचिव, २१ उपसचिव, ४२ अधिकृत र सय सुब्बा-खरदार तहका कर्मचारीलाई प्रदेशको काममा खटाएको हो । यसअघि मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनका लागि सहसचिवदेखि कम्प्युटर अधिकृतसम्मका ९७ कर्मचारीलाई खटाएको थियो । प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी पठाउनुपर्ने सरकारको आन्तरिक तयारी छ । अहिलेसम्म दुई चरणमा दुई सय ७४ कर्मचारी प्रदेश कार्यालयमा पुगेका छन् ।
दोस्रो चरणमा सातवटै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि सहसचिवदेखि सुब्बा-खरदारसम्मका कर्मचारी पठाएको हो । त्यस्तै, संसद् सचिवालयले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि हरेक प्रदेशमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतसहित चारजनाका दरले २८ जना कर्मचारी खटाइसकेको छ । उनीहरू सबै प्रशासन समूहतर्फका हुन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
प्रकाशित : शनिबार, माघ १३, २०७४०७:४९
ओली र प्रचण्डद्वारा मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा मिलाउन यस्तो निर्देशन: हेर्नुस् यी हुन् मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु किन गर्छन आत्महत्या ?
अध्यागमनमा डरलाग्दो सेटिङ: पाँच भारतीय विमान भित्रैबाट पक्राउ
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले काम गरिरहे महाअभियोग दर्ता गराउने